Azia Atsinanana · Marsa, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Azia Atsinanana · Marsa, 2017
Tantara mikasika ny Azia Atsinanana tamin'ny Marsa, 2017
Nifidy Ny Filoham-pireneny Faha-4 i Timor Atsinanana Hatramin'ny Niverenan'ny Fahaleovantenany
Timor Atsinanana31 Marsa 2017
Voafidy tamin'ny 57,08% i Francisco Guterres "Lu-Olo", izy no filohan'ny Fretilin fahatelo hatramin'ny fahaleovantena tamin'ny taona 1975 mba hiandraikitra ny fitondrana .
Tsy Voasakan-tSisintany ny Mozika, Saingy Mbola Nolavin'ny Kaonsilàn'i Etazonia ny Visa Ho An'ireo Mpikambana Amin'ny Antoko Mpihira Indoneziana
Etazonia30 Marsa 2017
Na inona na inona "sisintany" nampidirin'ny politika, tsy misy sisintany ny mozika, tsy misy sisintany ny firaisantsaina amin'ny zava-kanto, tsy misy sisintany avy amin'ny olombelona ny mitolona mihira avy ao am-po. Mampitambatra ny maha-olombelona antsika ny mozika, ary manasa anao izahay mba ho anisan'izany.
Filipina30 Marsa 2017
"Amin'ny maha mpanao gazety mpaka sary, miaraka hatrany amin'ny mahantra, mahafantatra ny zava-misy ara-tsosialy iainan'izy ireo."
Hong Kong : Ny Worker News Izay Namaky Bantsilana Ireo Anganongano Momba Ireo Mpitsoa-Ponenana No Nahazo Ny Loka
Hong Kong (Shina)30 Marsa 2017
"Tao anatin'ny taona vitsy, dia niroborobo ny fitsaratsaràm-poana ataon'ny fiarahamonina any Hong Kong ireo olona avy any amin'ny firenena hafa."
Mamporisika Ny Fitsitsiana Herinaratra Koa Ireo Jiro Marevaka Napetraka Tao Marina Bay Any Singapaoro
Singapaoro30 Marsa 2017
Jereo ny fiovan'ny sasany amin'ireo trano mijoalajoala ao Singapaoro ho lasa vao mainka mahavariana nandritra ny "Fetiben'ny Hazavana", izay nandrehetana jiro marevaka nataonà mpanakanto avy aminà firenena sivy teo amin'ny morondranon'i Marina Bay.
Naaton'ny Fitondrana Miramila Thailandey noho ny ‘ Fitsikerana Tsy Am-piheverana’ sy ny ‘Votoaty Mitongilana’ ny Voice TV
Thailandy29 Marsa 2017
"Manamafy izahay fa tsy mandrahona ny filaminam-pirenena ny votoaty na dia mety hanome fomba fijery hafa aza ny Voice TV. "
Zavakanto Anaty Fitateram-Bahoaka: Fantaro Ireo Mpanao Kisarisary Anaty Fitateram-Bahoaka ao Singapaoro
Singapaoro29 Marsa 2017
" mora ironako kokoa ny zavakanto nentin-drazana, toerana tsy manampaharoa, azo antoka ary ahitan-javatra maro ahafahako mampihatra ny zavatra tiako."
Ho Anareo Mpakafy Trano Simenitra, Toy Izao Ny Fampialofana Ara-tsosialy Ao Japana Izany
Japana28 Marsa 2017
Bilaogy iray mahaliana natokana hanadihadiana ny tetikasa fampialofana amin'ny trano simenitra izay fonenan'ireo taranaka Japoney maro nanomboka tamin'ny fiafaran'ny ady.
Loko Mena, Fijokoana ary Fanafihana An-tserasera: Manameloka Ny Firongatry Ny Herisetra Ny Gazety Mpanohana An'i Beijina
Hong Kong (Shina)28 Marsa 2017
Nitarika sahoan-dresaka hoe mizarazara ny tarika mpanohana an'i Beijina any Hong Kong ireo fandrahonana ireo ary voaomana hamongotra sehatra iray mahery vaika ao anatin'ny antoko Kaominista ny Filoha Shinoa Xi Jinping.
Ny Tranainy no Vaovao, Mihaino Ve Ianareo? Raki-Peo
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana27 Marsa 2017
Ho entinay any Jamaika, Indonezia,Syria,Makedonia ary Ethiopia amin'ny fampahatsiahivana, famelomana indray sy ny fipoiran' ireo tantara ianao ato amin'ity podcast ity.